१ spray स्प्रे क्रिसेन्थेमम्सको गुलदस्ता मस्कोमा पुग्ने फूलहरू अर्डर गर्नुहोस्
44 सेमी 40 सेमी
गुलदस्ता धेरै सुन्दर छ!
धेरै राम्रो र विनम्र, सूक्ष्म। गुलदस्ता उज्यालो र रमाईलो छ।
सिम्किना गलिना 20-09-2019
मैले विवाहमा प्रत्यक्ष गुलदस्तेहरू वितरणको लागि व्यवस्था गरेको थिएँ, तर अन्तिम क्षणमा मैले निर्णय गरें कि रातो होइन तर सेतो गुलाबहरू बढी स्टाइलिश देखिनेछन्। मैले अपरेटरलाई बोलाएँ र मलाई तुरून्त पुनः अर्डर गरियो थप डेलिभरी र सर्चार्जहरू बिना।
सहकर्मीको वार्षिकोत्सवको लागि उनीहरूले गुलदस्ता छनौट गरे - फलको टोकरी, बैंक स्थानान्तरणद्वारा भुक्तानको साथ। उनी खुसी भइन्! गुलदस्ता एकदम सुन्दर छ, सबै फलहरू ताजा छन्, सफा प्याक छन्।
यस अनलाइन स्टोरका लागि धेरै धेरै धन्यबाद! सुरुमा मलाई के छनौट गर्ने थाहा थिएन, किनभने त्यहाँ धेरै प्रकारका peonies थिए। तर फूलवालालाई धन्यवाद, म I मार्च को लागि विशेष फूलहरू लिन सकें। धन्यवाद!))
मँ खुसी थिए कि तपाईसँग ट्युलिपहरू अफ-सीजनमा छन्। सबै कुरा प्रस्टै बुझाइएको थियो, कुरियर राम्रो छ, फूलहरू ताजा र सुन्दर छन्)))
केवल यहाँ द्रुत वितरण र सँधै ताजा फूलहरू। यो कहिल्यै भएको थिएन कि गुलदस्ता गुलियो। यसलाई जारी राख्नुहोस्!
गुलाबका लागि धन्यबाद, सासूले यो मन परायो। यद्यपि उनी खुसी हुन गाह्रो छ। र कस्तो गन्ध! र रंग यति गहन छ। मलाई सबै कुरा धेरै मनपर्‍यो।
लेखकको गुलदस्ता को लागी धन्यवाद! यो मनमोहक कुरा हो! मेरी श्रीमती छक्क परे कि केहि भन्नु हुँदैन। Peonies, ट्यूलिप र आइरिसहरूको अद्भुत संयोजन। तपाईंको फ्लोरिस्ट एक शीर्ष निशान पेशेवर हो।
क्रिसेन्थेमम - १ पीसी
क्रिसेन्थेमम रसीला, रसीला र रंगीन गुलदस्ता सिर्जना गर्नका लागि आदर्श हो। पूर्वका देशहरूमा क्रिसेन्थेमम अत्यन्तै सम्मानित र महत्त्वपूर्ण फूलहरूमध्ये एक हो। जापानमा, गुलदाउदीसमेत देशको हतियारको कोटमा देखाइन्छ। त्यसैले क्रिसेन्थेमम कुनै पनि अवसरको लागि गुलदस्ताको लागि उत्तम विकल्प हो।
२ 12220 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २289०
spray spray स्प्रे क्रिसेन्थेमम्सको सुन्दर गुलदस्ता
२ 9800 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २230०
२ 12220 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २248०
उज्यालो र घमाई गुलदस्ता।
२ 3420 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २276०
कुनै पनि महिलाको हृदय त्यस्तो उपहार प्रतिरोध गर्न सक्दैन।
२ 5980 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २335०
गुलाबी गुलाबको प्यारा र नाजुक गुलदस्ता
२ 2190 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २383०
राम्रो र प्यारा बुके।
२ 6420 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २268०
१ spray स्प्रे क्रिसेन्थेमम्सको भव्य गुच्छा
२ 4940 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २223०
बक्सवुड - p पीसी।
यस्तो गुलदस्ता उपहार वा कुनै अवसरको लागि यसमा थपको रूपमा एकदम उपयुक्त छ :) सामान्यतया, यो एक प्रिय व्यक्ति, एक आमा, साथी, एक सहकर्मी र मालिकको लागि पनि एक आदर्श गुलदस्ता हो! तपाइँका प्रियजनहरूलाई कुनै कारण बिना नै खुशी पार्नुहोस्! र हामी तपाईंलाई सँधै यसको साथ मद्दत गर्नेछौं;)
२ 5980 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २301०